Kiimiko "waxbarasho": dabeecadaha, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Haddii aad raadineysid geedo midho leh beertaada, waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad tixgelisid ikhtiyaarka beeraha dayrta "Academic". Faahfaahin faahfaahsan ee kala duwan iyo shuruudaha for ay beerashada waxaa laga heli karaa maqaalkeenna. Isla markiiba, waxaan ognahay in mid ka mid ah qiimaha ugu muhiimsan ee geed this pear waa adkaysiga jiilaalka iyo suurtogalnimada koritaanka gobollada waqooyiga iyo aagagga kale ee "beerta khatarta ah".
Kala duwanaansho isdabajoog ah "Allegro": dabeecadaha, khibradda iyo ixtiraamka
Dhirta geedku waa marti joogta ah beerta. Daryeelida geedaha midhaha waa mid fudud, waxaadna ku cuni kartaa miraha casiir ah ilaa bilawga jiilaalka. Waxaa jira in ka badan 3 kun oo nooc oo adduunka ah, laakiin waxaan maqaalkan u jeedinaynaa Allegro isbeddel - iyaga oo dhadhamiyey, xaqiiqdii ma ahaan doonto mid aad u walaacsan. Taariikhda Dhalashada 2002, Machadka Cilmi-baarista ee Genetics iyo Xulashada Dhirta Miraha ee loo yaqaano
Kalluun "Williams oo casaan": dabeecadaha, khibradda iyo iwm
Tobaneeyo sano, dadka jilicsan ayaa helay tiro badan oo kala duwan oo isteroberi ah, si kastaba ha ahaatee, dabiicigu weli ma istaagayo, markaa mararka qaarkood waxaan arki karnaa isku dhafka dabiiciga ah ee abuura noocyo cusub. Maanta waxaan ka wada hadli doonaa pear Williams Red Red, sharaxaad ka bixinta kala duwan, iyo sidoo kale ka hadal ku saabsan xoogeeda iyo daciifnimo.
Kiimikada "Abbot Vettel": dabeecadaha iyo siraha wax lagu beero
Recently, noocyo kala duwan oo dalagyada beerta oo kaliya ayaa duuban. Pear - mid ka mid ah dalagyada "caadiga ah" ee caadiga ah, kaas oo siinaya goosashada sanadlaha ah ee nafaqo leh nafaqo leh, midab leh iyo dhadhan fiican leh. Tilmaamyada ugu muhiimsan ee pear wanaagsan waa nolol shelf, dhalidda sare iyo dhadhan fiican. Noocyada mudada dheer nool ee pollinators ayaa weli ku jira qadarin sare ee macaamilka casriga ah.
Dhawaan, shaqo ee breeders ayaa horumarin aad u firfircoon, sababtoo ah noocyo cusub pear cusub ayaa soo baxaya. By hagaajinta iyo hagaajinta tijaabooyinka iyada oo loo marayo synthesis leh noocyo kale, dhirta soo iibsato sifooyin cusub. Mid ka mid ah noocyada ugu guulaha badan ee la dhigay bred dhawaan, wuxuu ahaa pear "Zaveya".
Kalluun "Perun": dabeecadaha, sirta ee beerashada guuleysiga
Sida caadiga ah, noocyo qabow u adkaysta ee isteroberi, kuwaas oo lagu beeray gobollada leh cimil aad u adag, leeyihiin miraha yar yar. On asalka ay, kala duwan ee isteroberi "Perun", si guul leh ku koray Siberia, kala duwan yihiin wanaagsan. Waxaan sidoo kale ku ogaan doonnaa sharaxaadda iyo sifooyinka noocyada kala duwan. Selection Isticmaalayaasha "Perun" waa Machadka Cilmi-baarista ee Beeraha ee Siberia.
Noocyo kala duwan "November": dabeecadaha, sirta ah ee beerashada guuleysata
Madeecadda si kalsooni leh ayaa kaalinta labaad ugu jirta midka caan ku ah miro, marka labaad oo keliya tufaaxa. And pear "Noyabrskaya" waa xaalad dhif ah marka xataa xitaa xaaladaha adag ee dhulalka waqooyi midho dhalaalay casiir leh kori karaa on goobta. In article waxaan ku siin doonaa sharaxaad ka duwan kala duwan, waxaan ka sheekeyn doonaa faa'iidooyinka iyo sifooyinka sii kordhaya.
Kala duwanaanta isteroberi "Run": sifooyinka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee beeraha waa pears. Dhirta Kuwani ma aha oo kaliya aad u qurux badan, laakiin sidoo kale inta badan nagu farxaan leh goosashada badan oo ah midhaha dhadhan fiican leh, caafimaad leh iyo mid aan caadi ahayn. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah noocyo kala duwan oo kala duwan, waa ku adag tahay inuu bannaanka u go'aansado mid ka mid ah in ay door bidaan, sidaas darteed in ay tahay mid aan qabyo ahayn ee daryeelka, keeno beergooyska wanaagsan, iyo sidoo kale wuxuu leeyahay midhaha ujeedo guud.
Kombiyuutarka "Williams Summer": dabeecadaha, khibradda iyo ixtiraamka
Ereyga "duchess", dad badan ayaa xasuustaan ​​xusuusta shimbirta caanka ah ama macaan shimbir ah laga bilaabo caruurnimadooda. Wixii beeraley, eraygan cajiib ah macnaheedu waa noocyo kala duwan oo macaan oo leh dhadhan fiican macaan. Xilliga xagaaga ee kala duwan ee xagaaga, oo sidoo kale loo yaqaan "Williams Summer", bannaanka hiwaayadda si fudud u koraan beerahooda, iyo ka dib - si ay u goostaan ​​goosashada hodan ah haddii ay ogaadaan oo raacaan xeerarka iyo siraha qaarkood.
Pear Jiil "Cure": dabeecadaha, khibradda iyo ixtiraamka
Noocyada kala duwan ee Faransiiska "Cure" waxaa si fiican loogu yaqaan "Wakhtiga Williams". Inkastoo dhirtu hadda ka fog tahay dhulkeeda, waxaa si fiican u habboon. Kala duwanaantan waxay soo saartaa geedo waaweyn oo qoyan oo leh cufan cufan iyo goosashada qani ku ah. Taariikhda xulashada Noocyada kala duwan ee "pyramid" "loola jeedo" looguma talogelin in lagu caawiyo xulashada.
Ilaa hadda, noocyo badan oo isdabajoogta jiilaalka leh sifooyin tayo kala duwan ayaa la sameeyey. Mid ka mid ah waa noocyada kala duwan ee "Winter Winter", kaas oo ku kori kara cimilada qabow. Si kastaba ha ahaatee, si aad u hesho goosashada qani ku ah, waa inaad raacdaa xeerar dhowr ah oo ah beerashada iyo daryeelka geedaha xilliyeed. Taariikhda Nafaqada Jiilaalka Qalabka Jiilaalka Kalluunka jiilaalka waxaa loo sameeyey gobollada halkaas oo xaaladaha cimiladu u leeyihiin geedo waaweyn oo geedo waaweyn ay yihiin kuwo daran.
Kala duwan ee isteroberi "Uralochka": sifooyinka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Kiimikada "Uralochka" waa noocyo kala duwan oo dabiici ah oo si fiican u dulqaadanaya xitaa dhaxan daran waxaana lagu kala saaraa dhalid wanaagsan iyo koritaanka hore. Maqaalkani waxaan taaban doonaa sharaxaadda kala duwan, fahmeyso sifooyinka daryeelka, faa'iidooyinka muhiimka ah iyo faa'iido darrada. Taariikhda ah ee taranta iyo gobolka taranka. Uralochka Sort ayaa la gooyaa gobolka Chelyabinsk adoo ka tallaabay Ussurian pears iyo Severyanka.
Kiimikada "Beauty Chernenko": dabeecadaha, khibradda iyo tabaruca
Waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo isteroberi ah, Beauty ee Ruush waa kuwa ugu muuqda. Wax soo saarka, wax qabad la'aanta iyo iska caabinta cudurrada ayaa si gaar ah u soo jiidanaya beeraleyda iyo dadka degaanka xagaaga. Noocyo firfircoon, casaan leh iyo macaan ayaa laga heli doonaa dhammaan qaybaha warshadaha cuntada. Taariikhda Nafaqaynta Kala duwanaanta "Ruushka quruxda badan" waxaa lagu riday Machadka Cilmi-baarista ee Dhammaan Cudurka Ruushka iyo Nafaqeynta Dhirta Miraha (VNIIGiSPR) oo lagu magacaabo Michurin I.
Kiimiko "Sevearanka red-cheeked": dabeecadaha, khibradda iyo xayawaanka
Gobollada waqooyiga, badanaa way adagtahay in la helo noocyo geedo khudrad ah. Machadyada cilmi-baaristu waxay si joogta ah uga shaqeeyaan saarista noocyada dhaxanta u adkaysta. Mid ka mid ah miraha ka mid ah shaqooyinka noocaas ah waa noocyada kala duwan ee Severyanka pear-cheeked, lafilayo sharaxaadiisa, faa'iido iyo khasaaro. Taariikhda Isdaba-darrida iyo Naf-dhiska Gobolka Diirad-weyne oo la soo xulay ayaa la siiyay beeraha geedo miraha ah ee gobollada waqooyiga.
Maqaayada juuska ku jira sharoobada ee sharoobada ayaa soo baxaya aad u dhadhan fiican. Iyadoo diyaarinta saxda ah, xaleefyada waa la helaa oo dhan oo la mid ah miraha la shiiday, iyo liin waxay bixisaa dufan qurux badan waxayna ka caawisaa ilaalinta midabka quruxda badan. On faa'iidooyinka pear juus ah Pear leedahay guryaha badan oo faa'iido leh ka dib karinta.
Dhibaatooyinka marka kordhaya isteroberi: 5 sababood oo ah cur wareega caleen iyo madow
Kiimikada - mid ka mid ah geedaha caanka ah ee ugu caansan ee meelaha banaankeeda. Inta badan bannaanka u soo baxa waxaa soo food saartay madow si lama filaan ah, oo ku xoqaya caleenta, taasoo keenaysa geerida geedka. Sababtoo ah cudurrada iyo xaaladaha kale ee dhibaatada ka muuqda, waxaan fahmi doonaa maqaalkan. Bakteeriya gubasho Cudurka ugu khatarsan uguna badan ee pear waa gubasho bakteeriyo.